Fanarenana fotodrafitrasa :: Miverina ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra • AoRaha
Fanarenana fotodrafitrasa Miverina ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra
Efa manomboka indray ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra, omaly, rehefa niato tao anatin’ny andro vitsy noho ny fivahinianan’ny Papa Fransoa teto Madagasikara. Tsy hijanona ny asa raha tsy vita avokoa ireo lalana simba sy ratsy rehetra eto an-drenivohitra, araka ny fampilazana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy.
« Mbola hiitatra ireo asa ireo. Famerenana amin’ny laoniny ireo arabe eto an-tampon-tanànan’Antananarivo no atao amin’izao fotoana izao. Atsy ho atsy dia hisy arabe vaovao ihany koa hosokafana mba hampihenana ny fifamoivoizana sy hanitarana ny tanàna », hoy ny minisitra Andrianainarivelo Hajo.
Misasaka ny asa amin’izao fotoana izao. Efa lany ihany koa ny antsasaky ny tetibola natokana amin’ity fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra ity. Mitentina 12 000 tapitrisa ariary ny tetibola natokan’ny fanjakana amin’izany. Ny mpamatsy vola vahiny kosa no miantoka ny fanamboarana ireo arabe vaovao, araka ny fanampim-panazavana.
Filana ravinahitra :: Vehivavy maromaro any Koweït mitady lalana hodiana eto Madagasikara
Olana tamin’ny laza adina malagasy :: Mety hahazo naoty fanampiny maimaim-poana ireo mpiadina BEPC